Nhau - High Pressure (7.0Mpa) Steel Wire Reinforced Composite HDPE Pipe (SRTP Pipe)
Simbi waya yakasimbisa composite pombi itsva yakagadziridzwa simbi waya epurasitiki composite pombi.Mhando yepombi iyi inonziwo SRTP pombi.Iyi mhando nyowani yepombi inogadzirwa kubva kusimba repamusoro kuburikidza nemhando yesimbi waya uye thermoplastic polyethylene semidziyo, simbi waya mambure sekusimbiswa kwepombi yepurasitiki yepolyethylene, yakakwira density polyethylene (HDPE) asmatrix, ine kushanda kwepamusoro kweHDPE yakagadziridzwa bonding resin ichaita waya furemu. ine yemukati nekunze layer ye high density polyethylene padhuze pamwe chete, Kuti ive neyakanakisa komputa mhedzisiro.Iyo pombi inoumbwa inokunda zvisingabatsiri zvese simbi uye epurasitiki, ichichengeta zvakanakira zvese zviri zviviri, nekuti yakakwirira-yakasimba simbi yekusimbisa yakavharirwa mune inoenderera thermoplastic.
Simbi waya yakasimbisa composite pombi, kushandiswa kwemhando yepamusoro zvinhu uye tekinoroji yekugadzira yepamberi, kuitira kuti ive nepamusoro pekumanikidza kuita.Panguva imwecheteyo, iyo inoumbwa pombi ine yakanakisa kuchinjika, yakakodzera kureba yakavigwa mvura uye gasi pombi hurongwa.Polyethylene electrofuse pombi inoshandiswa kune simbi waya yakasimbiswa polyethylene composite pombi.Kana uchibatanidza, mukati mekupisa muviri wepipe fitting inoshandiswa kunyungudutsa kunze kwepurasitiki yepombi uye mukati mepurasitiki yekuisa pombi, kuitira kuti pombi uye kusungirirwa kwepombi zvibatanidzwe pamwe chete zvakavimbika.
Tsanangudzo(mm) Ukobvu hwemadziro(mm)
1.Iko kusimba kusimba, Impact kuramba uye kusimba kwakakwira kupfuura akajairwa PE mapaipi.
2.Iyo creep resistance coefficient uye yakaderera yekuwedzera coefficient yakafanana neye PE pombi.
3.Anti-corrosion performance yakafanana nePE pombi.Iwo tembiricha kuramba kugona kwakatokwira kupfuura PE pombi.Low thermal conductivity coefficient.
4.Rusvingo rwemukati rwakatsetseka pasina kuyera.Musoro kurasikirwa kwepombi uchienzanisa nesimbi pombi iri 30% yakaderera.
5.Nekugadzirisa dhayamita yewaya dzesimbi uye kukora kwepurasitiki, mapaipi akasiyana-siyana anogona kugadzirwa.
6.Hupenyu hwese hwesevhisi hunotarisirwa kupfuura makore makumi mashanu.
7.Kureruka muhuremu, kuiswa nyore, kwakabatana ne electro-fusion joint method.
◎ Injiniya yeMataundi: mvura yekuvakwa kwemadhorobha, mvura yekunwa, mvura yemoto, kupisa network kuseri kwemvura, gasi, kutapurirana gasi rechisikigo, nzira huru yakavigwa migero uye dzimwe nzira.
◎ Munda wemafuta uye gasi gasi: tsvina yemafuta, gasi regetsi retsvina, mafuta uye gasi musanganiswa, yechipiri neyechitatu kudzoreredza mafuta uye kuunganidza uye yekufambisa nzira pombi.
◎ Kemikari indasitiri: asidhi, alkali, indasitiri yekugadzira munyu, peturu, indasitiri yemakemikari, kemikari fetiraiza, mishonga, machira, kudhinda nekudhaya, maindasitiri erabha nemapurasitiki kutakura gasi rinoparadza, mvura, pombi yakasimba yehupfu uye pombi yekuburitsa.
◎ Injiniya yemagetsi: kugadzira mvura, kuseri kwemvura, kugovera mvura, mvura yemoto, kubviswa kweguruva, marara slag uye mamwe mapaipi.
◎ Mugodhi weMetallurgical: unoshandiswa kufambisa svikiro uye pulp, miswe, pombi inopinza mhepo uye pombi yekugadzira mukunyungudutsa simbi isina-ferrous.
◎ Kutakurwa kwemvura yegungwa: kutakurwa kwemvura yegungwa yezvidyarwa zvekubvisa salination, zvidyarwa zvemagetsi zvemugungwa uye maguta ezvikepe.
◎ Kuvaka zvikepe: pombi dzemvura dzechikepe, pombi dzemvura, pombi dzeballast, pombi dzemhepo uye zvichingodaro.
◎ Kudiridza kwekurima: pombi yetsime yakadzika, pombi yesefa, pombi inotakura, pombi yemvura, pombi yekudiridza nezvimwe.
CHUANGRONG iindasitiri yekugovana uye yekutengesa yakabatanidzwa kambani, yakavambwa muna 2005 iyo yakatarisana nekugadzirwa kweHDPE Pipes, Fittings & Valves, PPR Pipes, Fittings & Valves, PP compression fittings & Valves, uye kutengeswa kwePlastic Pipe Welding machines, Pipe Tools, Pipe Repair Clamp.zvichingoenda zvakadaro.
Nguva yekutumira: Kubvumbi-22-2022